Mashruuca Fursadfund iyo abaaraha ka jira Soomaaliya maxaa kala heysta?!!
Home » Qormooyinka » Mashruuca Fursadfund iyo abaaraha ka jira Soomaaliya maxaa kala heysta?!!	Mashruuca Fursadfund iyo abaaraha ka jira Soomaaliya maxaa kala heysta?!!
12/11/2016	671 Views Dalka Soomaaliya waxaa ku soo badanaya mashaariicda kala duwan oo siyaabo kala loogu urursanayo lacago deeq ah, taasi oo dadka qaarkii u fasirteen inay tahay mid dano gaar ah laga leeyahay iyadoo loo adeegsanaayo magacyo kala duwan.
Previous: FIIRSO SAWIRADA: Beesha Sayad Maxamed oo ka mid ah Beelweynta Warsan Geli Harti oo Gogol Raali Galin ah u dhigtay Beesha dhexdeeda
Next: Gaas iyo Guuleed oo wada hadalo kaga furmay Gaalkacyo..
Beryihii lasoo dhaafay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa kasocda wada hadalo u dhaxeeyay maamulka ...
Tan iyo markii la doortay ra’iisul wasaare Kheyre, waxaa jiray olole lagu tayeeynayo shaqada iyo ...